မိုင်၁၀၀၀ ခရီးစဉ်(၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » မိုင်၁၀၀၀ ခရီးစဉ်(၁)
Posted by kai on Jan 2, 2013 in Editor's Notes, Local Guides, Photography, Travel | 39 comments
၂၀၁၂ နှစ်ကုန်… အားရက်ရတုံး.. ကျုပ်သွားတဲ့ခရီးစဉ်က.. အောက်ကမြေပုံအတိုင်းပါပဲ..။
ဒါပေမယ့်.. ခရီးသွားနေရင်းကပဲ.. လမ်းအခြေအနေဖုံးဆက်လှမ်းမေးပြီး.. ရီနိုမြို့ဖက်အခြမ်းခရီးစဉ်ကို ဖျက်လိုက်ရပါတယ်..။
နီဗားဒါပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဖက်ပိုင်းမြို့လေးဖြစ်တဲ့.. အဲဒီရီနိုမြို့မှာ.. အနှုတ်အောက်အအေးချိန်ဖြစ်နေပြီး.. ကားမှာနှင်းထဲသွားနိုင်တဲ့ချိန်းကြိုးမတတ်ထားလို့ပါ..။
လမ်းမှာ ဘယ်လိုဆောက်လုပ်ရေးရှိတယ်..။ ပိတ်ထား…ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတာတွေကိုတော့.. အောက်ကလင်ခ့်မှာ.. စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်.။
ဒီနေ့ တင်ပေးမယ့်ခရီးစဉ်ထဲ.. လော့စ်အိန်ဂျလိစ်ကနေ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကမ်းတလျှောက်ကနေ ဆန်ဖရမ်စစ္စကိုတက်လမ်းဖြစ်တဲ့ လမ်းတလျှောက်ကရှုခင်းတချို့ရယ်..။ ပထမရပ်နားရာဖြစ်တဲ့…Stanford university ထဲကရှုခင်းတချို့ရယ်နဲ့ စလိုက်ပါမယ်..။
ကျန်တာလေးတွေ.. ကော်မန့်နဲ့ပဲ..ရေးရင်းး မျက်စိထဲမြင်အောင် ပြပြော..ပြောမယ်ပေါ့..။
Elephant seals on the beach at Piedras Blancas in southern Big Sur near San Simeon.
ဆင်ဖျံကြီးတွေ ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာတက်အိပ်နေပုံပါ။ ဘယ်သူမှခဲနဲ့မပေါက်.. အနှောက်အယှက်မပေးကြပဲ.. တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ဓါတ်ပုံရိုက်..ကားပေါ်ပြန်တက် ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်..။
Ragged Point Inn: San Simeon Hotel on Big Sur Coast
အင်မတန်မတ်စောက်တဲ့.. သမုဒ္ဒရာကမ်းမေးတင်ဆောက်ထားတဲ့ Inn ပါ..။
Big Sur Coast မှာပဲ.. အောက်ကမ်းခြေကိုဆင်းတဲ့.. လမ်းကလေးပေါ့..။ အဲဒီမှာ ဆင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ အပေါ်ပိုင်းလှမ်းမြင်နိုင်ပါတယ်..။ (ဓါတ်ပုံအလည်လောက်က.. အမဲအစက်ကလေးပါ) အဆင်းကတော်တော်လေးမတ်ပါတယ်..။
အရှေ့ပုံရဲ့.. (သစ်ပင်အုပ်၂ခုကြား)ဟိုးအောက်ခြေကမ်းကို တယ်လီနဲ့ဆွဲရိုက်လိုက်တာပါ..။ ပထမပုံမှာ.. မြင်တောင်မမြင်ရပါဘူး..။ အောက်မှာခြေရာတွေရယ်.. လူတယောက်ရယ်ရှိနေပါတယ်..။
(ရွာသူားထဲက.. ဘယ်သူဆင်းကြည့်ရဲသလည်း ? )
PCH 1 ဟိုက်ဝေးလမ်းမှာ.. မီးပွိုင့်နဲ့. .တလမ်းမောင်းထားပြီးတလှည့်စီပေးဖြတ်တဲ့ ၂နေရာတွေ့ခဲ့တယ်..။ လမ်းပြင်နေလို့ပါ..။ အဲဒါနဲ့.. မီးပွိုင့်စောင့်နေတုံးလာခဲ့တဲ့လမ်းကို.. ပြန်ရိုက်လိုက်တာ..။ တောင်ကြောတလျှောက်ရိုးတိုးရိပ်တိပ်..အစင်းကြောင်းလေးက..ကားလမ်းဖြစ်ပါတယ်..။
Stanford University ထဲကအရုပ်တွေ..
Stanford University ကျောင်းဝင်းစင်္ကြန်တနေရာ
Stanford University ကျောင်းဝင်းတနေရာ
Stanford University ကျောင်းဝင်းလမ်းတနေရာ။ အဲဒီမှာ ကြော်ငြာBox ကလေးတွေ့တာနဲ့လှမ်းရိုက်လိုက်တာပါ..။
Stanford University ကျောင်းဝင်းတနေရာ။ အဲဒီမှာ ကြော်ငြာBox အနီးကပ်..။ အဲဒါမျိုးတခုမက…တွေ့တယ်..။ အာအိုင်တီရဲ့ပာတွန်းဘောက်စ်လေး သတိရမိသား..
Stanford University ကျောင်းဝင်းအမှတ်အသားတခု။ နောက်ကရိုးတိုးရိပ်တိတ်တွေက.. စက်ဘီးရပ်ဖို့.. တိုင်တွေပါ..။ စက်ဘီးကိုသော့ချိပ်ထားဖို့လုပ်ထားတယ်ပေါ့..။စက်ဘီးစတန်င်းတွေ တော်တော်များများတွေ့ရတယ်..။
Stanford University ကျောင်းဝင်းထဲ..လာရောက်လေ့လာသူများ..
Stanford University ကျောင်းဝင်းထဲကနာရီစင်။ စင်အောက်မှာ.. နာရီသံပါတ်စက်ကြီးကို မှန်အိမ်နဲ့ မြင်အောင်ဖွင့်ပြထားပါတယ်..။
Stanford University ကျောင်းဝင်းထဲ..လာရောက်ဆော့ကစားနေသူများ
Stanford University ကျောင်းဝင်းထဲက..မျှော်စင်..
Stanford University ကျောင်းဝင်းထဲအ၀င်.. University လမ်းမကြီးထိပ်တည့်တည့်က.အဆာက်အဦ
Stanford University ကျောင်းဝင်းအ၀င်.. University လမ်းဘေးက.. ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်..
အထဲမှာ.. ချိုင်းနီးစ်လိုပါရေးထားတာမို့ ရိုက်လိုက်တာပါ..။
Stanford University ကျောင်းဝင်းထဲက.. ကားပါ့ကင်။ မသန်စွမ်းသူများအတွက် နေရာပါ..။ သူတို့က ကျောင်းနဲ့အနီးဆုံးနေရာရတယ်ပေါ့..။
Stanford University ကျောင်းဝင်းထဲက..အလည်လာသူတို့အတွက် ကားပါ့ကင်..၊ ၁ဒေါ်လာဆို..တနာရီလောက်ရပ်လို့ရပါတယ်..။ ကျောင်းသူားတွေကတော့.. ပါမစ်ကလေးကားမှာကပ်ထားရင်.. ပေးထားတဲ့ နေရာတွေမှာ ရပ်လို့ရပါတယ်..။
Stanford University ကတော်တော်ကြီးပြီး.. ကျယ်ဝန်းတဲ့.. တက္ကသိုလ်ကြီးပါပဲ..
ဆီလီကွန်ဗဲလ်လီနဲ့ မနီးမဝေးမှာရှိပြီး.. အင်တာနက်ကို.. မွေးဖွားစေခဲ့ရာ တက္ကသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်..။
The Leland Stanford Junior University, commonly referred to as Stanford University or Stanford, is an American private research university located in Stanford, California on an 8,180-acre campus near Palo Alto. Wikipedia
Motto: Die Luft der Freiheit weht, The wind of freedom blows
Snow Chain ဆိုတာ..အောက်ကပုံထဲကဟာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်..။
စနိုး(နှင်းပွင့်ဖတ်)လမ်းပေါ်ကျနေရင်.. သာမန်ကားဘီးနဲ့မောင်းရင်.. ကားက.. ချော်လဲတတ်ပါတယ်..။
အထူးသဖြင့်.. နှင်းပွင့်ဖတ်တွေကြားထဲဆိုတာထက်.. အေးလွန်းလို့ရေခဲပြင်လို.. ကြည်ရောင်ထနေရင်.. ပိုဆိုးပါတယ်..။
ကားက.. လေးဘီးလုံးရပ်နေရင်းကို.. ရွေ့နေတတ်တာပါ.။
ဒါကြောင့်.. နှင်းပွင့်ဖတ်ကျတဲ့ဒေသတွေမှာ..ကားမောင်းရင်.. စနိုးချိန်း လိုပါတယ်..။
အဲ့ဒီလို ချိန်းမျိုး (အဲ့ဒီထက်နည်းနည်းပိုထူတယ်) မိုးတွင်းဆိုရင် ဖားကန့်သွားတဲ့လမ်းတွေပေါ် ၊ ရွှေတောသွားတဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာ သုံးကြတာများတယ်။ လမ်းတွေကတော့ စပါယ်ရှယ် ပျက်တာပေါ့ဗျာ။
စည်းကမ်းရှိတဲ့ လူတွေနေတဲ့နေရာ ဆိုတော့ဘာပြောရမလဲဗျာ သန့် ရှင်းစွာနေတတ်ဖို့ ဘဲအတုယူမိပါကြောင်း
ဒီကနေ အခု အဲဒီကိုသွားရင် ပီစာမလိုတော့ဘူး ခီည.
US grants Taiwan visa-waiver status – Taipei Times
Oct 3, 2012 – The US last night announced Taiwan’s membership in its Visa Waiver Program (VWP), as the nation became the 37th country to receive the …
ကလေးတွေလည်း.. ဒီကကျောင်းတွေမှာ.. ကျောင်းအပ်ပေါ့…။
ထိုင်ဝမ်.. စင်္ကာပူ..ချိုင်းနားက.. ကျောင်းသားတွေချည်း..အများကြီးကျောင်းကောင်းတွေ..တက်ကြတာ…။
” ထိုင်ဝမ်.. စင်္ကာပူ..ချိုင်းနားက.. ကျောင်းသားတွေချည်း..
သူကြီးပြောတာ မှန်ပုံရပါတယ် ။
တရုတ် ကျောင်းသားတွေ များ မများကတော့ ၊
ဆိုင်းဘုတ်တွေမှာ တရုတ်စာနှင့်ပါ ရေးထားတာက သက်သေပေါ့ဗျာ ။
ကျေးဇူးပါသူကြီးခင်ဗျား အကြီးမလေးကစာတော်သလို စာကြိုးစားတယ် အစီအစဉ်တော့ရှိတယ်
စာတော်ရင် ကြောင်ကြီးဆီ ပို့လိုက်ပါ၊ မတော်လည်း ပို့လိုက်ပါ။ လုပ်ရပ်ခြင်းတူတောင် စေတဏှာပိုသန်ကြောင်း အာမခံသည်။
ဒါနဲ့ သမီးဒေါ်ဂလေးရော ဒါ့ပုံထဲ မတွေ့ပါဂလား၊ သူ့တယောက်ထဲ ထားပြီး သဂျီးလင်မယား စုံတွဲခုတ်ကြတယ်ပေါ့၊ ဒီလိုမှန်းသိ လေယဉ်ပျံစီးသွားတွေ့ပါတယ်။ ခုတော့ ဝေး……ဝေးကြပြီလေ…
သဂျီး တင်ရဲဘူးးး ဒဲ့ …
ဒါနဲ့ .. စကားမစပ် ..
သမီးဒေါ်ဂလေးက ဥကြောင်ရီးးကို လွမ်းလို့ ဆိုဒလားဘဲ ..
အိုက်ဒါ .. သွားတွေ့လိုက်အုံးးး
ဖျံကြီးတွေ ချစ်စရာကောင်းတယ်ဗျာ။ အနားကပ်ပြီး ကိုင်ကျိချင်တာ။
သမုဒ္ဒရာဘက်ဆင်းတဲ့ လမ်းကတော့ ရင်ခုန်စရာဂျီးးး။
ကားလေးတေ တန်းစီနေတာလဲ ညီလို့။ ဘဒူမှ ကျော်မတက်
အမှိုက်မရှိ ကျယ်ဝန်း သန့်ရှင်း သဘောကျစရာတွေကြီးဘဲ။
လူတွေတော့ဘယ်လိုနေမယ်မသိ။ လူနေမှုစနစ်ကတော့ အားကျ အထင်ကြီးစရာပါဗျာ။
ကားသတိထားမောင်းနေရတာမို့.. လမ်းမှာ.. လက်တဖက်နဲ့မောင်းရင်း..ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတင်ပေးလိုက်တယ်..
တက္ကသိုလ်ကြီး သန့်ရှင်းသပ်ရပ်လွန်းနေဒယ် …..
ကျုပ်တို့ဆီမှာလည်း ဒီလိုမျိုးဆို ဘယ်လောက် ကောင်းလိမ့်လေမလဲ ….
ကျောင်းဝင်းထဲက အရုပ်တွေက ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပါလားဂျ …
အိုက်ဒီ အဓိပ္ပါယ်လေးများ သိရင်ဖြင့် သိချင်ဘာဂျောင်းးးး
စနိုးချိန်းဆိုလို့ တောင်ငူလိပ်သိုဖက်ကိုသွားတုန်းက တော်တော့ကိုဆိုးတဲ့ ကားမသွားသင့်တဲ့လမ်းမျိုးကို ဖိုးဝှီးနဲ့သွားခဲ့တယ်…မြေစေးချိုင့်ပြည့်အကွေ့အကောက်များ မတ်စောက်တဲ့တောင်တက်လမ်းပေါ့..ချောင်းနက်ကြီးထဲလည်းဆင်းရသေးတယ်..ဘီးကခြေကုတ်လွတ်ပြီး ချောင်းပြန်အတက်မှာစက်ရပ်သေးတယ်.. အဲဒီလမ်းကို မိုးတွင်းမှာ ဘီးတွေကို ချိန်းကြိုးတွေပတ်ပြီးတက်တယ်ပြောတယ်.. မတွေးရဲစရာပဲ..
ကားပါကင် က အကြွေစေ့ထည့်ရတာလားဗျ…..။
ကျောင်းဝင်းထဲက ကြော်ငြာBoxနဲ့ အရည်းကြီးရုပ်တွေကိုကြိုက်တယ်
သမုဒ္ဒရာဆင်းတဲ့ မတ်စောက်တဲ့နေရာကြီးတွေက Westlife အဖွဲ့ရဲ့ Try Again သီချင်းထဲကနေရာတွေလား။
( ဆင်ဖျံကြီးတွေ ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာတက်အိပ်နေပုံပါ။ ဘယ်သူမှခဲနဲ့မပေါက်.. အနှောက်အယှက်မပေးကြပဲ.. တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ဓါတ်ပုံရိုက်..ကားပေါ်ပြန်တက် ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်..။)
ဆိုခြင်တာက ဗမာပျီမှာဆို ဂဲနဲ့ပေါက်မယ် ဖမ်းပြီးချက်စားမယ်
အဆင့်တန်းမရှိဘူး ဒီလိုဆိုခြင်သလား သဂျီးမင်း
ကျွန်မ လဲ အဲဒီလိုဘဲ သဘောပေါက်လိုက်မိပါတယ်။
ဖျံသိုလ် ရှာတဲ့ ကောင်နဲ့ တွေ့ ရင် သဌေးတောင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ် ပေါ့  ….
အမှန်က.. သတ္တ၀ါတွေ..ချစ်ရမယ်..စောင့်ရှောက်ရမယ်.. ဆိုတာ.. ဒီလိုနေရာသုံးရမှာကို..
မွန်ကစ်တော့ အဲ့ဆင်ဖျံကြီးတွေ အိပ်နေတာကို ကြည့်ရင်း အသဲယားလာတာနဲ့ ဗမာပီပီ ခဲနဲ့ ပေါက်ချင်စိတ် ပေါ်လာလို့ မနည်းထိန်းထားရတယ်တော်… ဂယ်ပေါဒါ..
သဂျီး ရဲ့ ခရီးစဉ်ပေါ့လေ
အဲဒီ တက္ကသိုလ်တော့ ဆိတ်ဝင်စားတယ်
ကိုယ့်ရဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (အရင်ကတော့ အရှေ့တောင်အာရှ မှာ နာမည်ကြီး) ကို အင်မတန် ခမ်းနားလှပြီ၊ ကျယ်ဝန်းလှပြီ ထင်ခဲ့တာ။
ဒီလို တက္ကသိုလ်ကြီးတွေ နဲ့ ယှဉ်လိုက်တော့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး ဖြစ်သွားတာနော်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကို တည်ထောင်တဲ့နှစ် ၁၈၇၈ –
စတန်းဖို့တက္ကသိုလ် ကို တည်ထောင်တဲ့နှစ် ၁၈၉၁
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က ၁၃နှစ် စောပြီး ရှိခဲ့တာ။
ဆက်တွေးမိတာ ပြောရရင်တော့ ကျွန်နံ့ မပျောက်ဘူးဖြစ်တော့မှာမို့ ဆက်မတွေးတော့ပါဘူး။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ထဲမှာလဲ စတန်းဖို့ က ကျောင်းဝင်းစင်္ကြန် လို မျိုးတွေရှိတာဘဲ။
ပထမ ရန်ကုန် ကောလိပ် အဆင့်ကနေ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လို့ အမည်ပြောင်းတာ ၁၉၂၀ မှာမို့ အဆောက်အဦးက တစ်ခြား ကိုလိုနီ တက္ကသိုလ် (ဥပမာ – ကလကတ္တား တက္ကသိုလ်) လောက် သိပ်မခမ်းနားခဲ့တာထင်ရဲ့။
အောက်စ်ဖို့ တက္ကသိုလ် ကို တည်ထောင်တဲ့နှစ် မသိ ဖြစ်နေပေမဲ့ စာစသင်တာ ၁၀၉၆ လို့ ဆိုတာဘဲ။
ကိန်းဘရစ်ခ်ျ ကို တည်ထောင်တဲ့နှစ် က ၁၂၀၉
အဲဒါ မြန်မာပြည်မှာ အနော်ရထာတို့၊ ကျန်စစ်သားတို့ ခေတ် ထင်ပါရဲ့။ (ရမ်းတီး အထင်)
(ကိုစံလှကြီး တော့ ပိုသိနိုင်မယ်)
သူကြီးတို့ သွားခဲ့တဲ့ ဟိုက်ဝေးလမ်းမကြီး က အဲဒီ ကမ်းပါးတွေနဲ့ သမုဒ္ဒရာကြီးကို တောက်လျှောက် မြင်သွားရတာပေါ့နော်။
နေဝင်ချိန် ပုံလေးများ မပါခဲ့ဘူးလား။
တစ်ရွာလုံးကို ရောက်ဖူးအောင် ခေါ်သွားလို့ ကျေးဇူးပါ သူကြီးရေ။
ထိုကဲ့သို့အေးအေးလူလူ ခရီးထွက်ချင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါအိ
ကျန်တာတော့ ဘာမှမသိ ဘာမှမတတ်ပါသဖြင့် မပြောတတ်ပါကြောင်း
တဖက်မှာ ပေ၁၀၀၀လောက်ချောက်နဲ့..တဖက်မှာ.. ကျောက်တုံးကျတတ်သည်သတိပေးဆိုင်းဘုတ်တွေတင်ထားတဲ့.. ကျောက်နံရံနဲ့..
“သေဟဲ့ နန္ဒိယ” ..အဲ..အဲ.
သဂျီးကားရဲ့အော်တိုဒရိုက်ဘင်း စစ်စတမ်တွေ
ဆေ့ဖတီးဖက်စ် နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ ကား
ကျုပ်တို့ နိုင်ငံမှာလေ ၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်လောက်ကကားတွေကို အကောင်းဆုံးထားသုံးနေရတာကလား
“သေဟဲ့ ရှေးစွန်းစွဲ” ဆိုတာ.. ကိုရင်ပေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးနော..။ တမင်တကာ ရှေးစကားဖေါက်ပြီး.. ထွင်ပြောတာ…။
အမှန်က အပြန်လမ်းမှာ.. တနာရီ ၉၀လောက် အော်တိုလုပ်ပြီး.. တောက်လျှောက်မောင်းချလာတာ.. တော်တော်သက်သာပါကြောင်း..:
သူတို့ဆီက ပညာရွာကြီးတွေက သန့်ရှင်း ကျယ်ဝန်း ခမ်းနားလိုက်တာနော်…
ကျုပ်အမြင်တော့ တက္ကသိုလ်ဆိုတာ သိပ်ပြီးကျယ်ဝန်းရှုပ်ထွေးလွန်းရင်
တနေရာနဲ့တနေရာ သွားရလာရတာ အချိန်ကုန် လူပန်းမို့ သိပ်မကောင်းဘူးထင်မိတယ်။
လက်ရှိရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ လေးဆလောက် / လှိုင်တက္ကသိုလ်လောက်ဆို အတော်ပဲထင်တာပဲ…။
သူတို့တက္ကသိုလ်တွေက ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လို သံတိုင်ခြံစည်းရိုးတွေ အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာကာပြီး
ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီးမမြင်ဘူးတာတွေမြင်ရ ဗဟုသုတတွေလဲရပါ့ ..
ကြိုက်တဲ့ပုံတွေလဲကူးထားပါကြောင်းနဲ့ Standford University ထဲက အရုပ်တွေကိုကြည့်ပြီး ကကွက်တွေများ ထွင်ခဲ့ကြလေသလားလို့တွေးမိသွားပါကြောင်း ….
Stanford ထဲက ရုပ်ထုတွေက နာမည်ကြီး Bronze (ကြေး?) ပန်းပုဆရာ Rodin ရဲ့ Burghers of Calais ဆိုတဲ့ လူ၆ယောက် ရုပ်ထုပုံပါ။ အင်္ဂလိပ်တွေကို စစ်ရှုံးတော့ ပြင်သစ် Calais မြို့က ခေါင်းဆောင် ၆ယောက်က အရှုံးပေးလမ်းလျှောက်ထွက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကို ထုထားတာ။
Stanford ပြတိုက်မှာ Rodin ရဲ့ တခြား ကော်လက်ရှင်တော်တော်များများရှိတယ်။ Rodin ရဲ့ Thinker ဆို ရွာသူားတွေ သိလောက်ပါတယ်။
သကြားလုံးတို့များ.. ကြော်အောင်.. တော်လိုက်တာ..
လူတယောက်များ.. သူ့ခွေးဆွဲတဲ့ကြိုးကို..အဲဒီလူအုပ်စု..ရုပ်ထုတခုလက်ထဲထည့်.. ဓါတ်ပုံဆင်ရိုက်နေတာတောင်.. စောင့်နေလိုက်ရသေးတယ်..
သူကြီးရဲ့ခရီးမှာ Stanford University ထဲကအရုပ်တွေ ရုပ်ထုပုံတွေကိုတော့ စိတ်ဝင်စားမိတယ်။
Stanford University ထဲကအရုပ်တွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်။
Stanford University ကျောင်းဝင်းစင်္ကြန်တနေရာကို တွေ့တော့ ကောလိပ်ဂျင် ရုပ်ရှင်ထဲက ကောလိပ်ဂျင်နေ၀င်းနဲ့ မြင့်မြင့်ခင်ဇာတ်ဝင်ခန်းကို သတိရမိတယ်။
အင်္ဂလိပ်တွေကို စစ်ရှုံးတော့ ပြင်သစ် Calais မြို့က ခေါင်းဆောင် ၆ယောက်က အရှုံးပေးလမ်းလျှောက်ထွက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကို ထုထားတာ။
The story goes that England’s Edward III, afteravictory in the Battle of Crécy, laid siege to Calais, while Philip VI of France ordered the city to hold out at all costs. Philip failed to lift the siege, and starvation eventually forced the city to parley for surrender.
In history, though the burghers expected to be executed, their lives were spared by the intervention of England’s Queen, Philippa of Hainault, who persuaded her husband to exercise mercy by claiming that their deaths would beabad omen for her unborn child.
ခရီးတွေ.. အတူ ထွက်လိုက်ရသလို……လို……
လက်ရှိ ဂိုးလ်ဒင်း စတိတ်က နျူးဂျာစီ မဟုတ်လား
ဂိုးလ်ဒင်းစတိတ် အဟောင်းအနွမ်းမှာ နေတဲ့ သဂျီးရဲ့ ….
Snow Chain ကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပဲ..ခုမှကြားဖူးတယ်
ဓာတ်ပုံတွေလဲလှပါတယ် တဂျီးရေ.. ဒါပေမယ်. ပုံတွေကကျပ်နေတယ်..
သဂျီးမင်းရဲ့ ခရီးသွားဓါတ်ပုံတွေ ကြည့်သွားပါတယ်..
အဲထဲကမှ..တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့ Snow Chain ပုံရယ်
စုလို့ရသလောက် စာအုပ်လုပ်ထားတာလေး ပြီးခဲ့တဲ့ဆရာကန်တော့ပွဲက၀ယ်ခဲ့သေး…
မမ ကတောင် သဂျီးအတွက်တစ်အုပ်ပိုဝယ်ခဲ့သေးတယ်…လူကြုံနဲ့ပို့ပေးပါလိမ့်မဗျား..